गालामा छेड्नु: प्रक्रिया, सुविधा र समीक्षा विवरण
सौन्दर्य, छाला हेरविचार
पर्याप्त लोकप्रिय telomodifikatsiya आज - छाला punctures। एक आफ्नो किसिमहरु को - गालामा छेड्नु। कसरी के सुविधा जस्तै punctures गर्न?
को गाल भेदी को इतिहास
शरीर र अनुहार मा छाला punctures को धेरै प्रकार एक सताब्दी अघि देखा पर्नुभयो। गालामा भेदी, तिनीहरूलाई को एक होइन आधुनिक telomodifikatsiya छ। यो धेरै संस्कृति मा अभ्यास भनेर अनुष्ठान punctures छाला ज्ञात छ। यस्तो manipulations धार्मिक र विभिन्न बिदा को समय मा बाहिर छन्। महत्वपूर्ण को प्वाल पार्ने काम प्वालहरू उत्पादन सजावट कहिल्यै सम्मिलित को तथ्यलाई थियो।
यो अनुष्ठान छेड्नु एक हडताली उदाहरण फुकेत (थाईल्याण्ड) मा देख्न सकिन्छ। यहाँ आज आयोजित एक छुट्टी vegetarians, को mediums एक ट्रान्स मा गिरावट र तेज छाला उपकरणहरू आफ्नो गाला पियर्स जुन बेलामा। सभ्य भेदी यो sacrament एक अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। आज छाला प्वाल पार्ने काम को मुख्य उद्देश्य - आफ्नै शरीर को सजावट।
पार माध्यम स्थापना labret संग छाला प्वाल पार्ने काम
परम्परागत embodiment गालामा छेड्नु - को गठन च्यानल विशेष सजावट (labret) मा एक छाला प्वाल पार्ने काम र पछि सम्मिलन मार्फत। सामान्यतया, यो प्राकृतिक telomodifikatsiya "dimples" बुझाउँछ। Punctures को गाला को बीचमा वा तल्लो भागमा symmetrically छन्। fixation लागि एक अन्त र अन्य एक सजावटी तत्त्व मा एक सपाट सर्कल संग आभूषण - छेड्नु यस प्रकारको लागि मात्र उपयुक्त labrets छ। यो छेड्नु आफ्नो दाँत र जिब्रो चोट छैन। आभूषण को गाला प्वाल पार्ने काम, लामो समय लिन यो मामला मा जस्तै, च्यानल केही दिनको लागि ढिलाइ हुन सक्छ सिफारिश छैन।
transdermal प्रत्यारोपण स्थापना
तपाईं गालामा छेड्नु को नजर चाहनुहुन्छ भने, तर तपाईं चाहँदैनन् केही कारणले punctures मार्फत गर्छन, वैकल्पिक छ। अनुहार मा छाला transdermal प्रत्यारोपण सेट गर्न सकिन्छ। यो विकल्प क्लासिक छेड्नु देखि अलि फरक telomodifikatsii। आधार एक विशेष सजावट प्वाल पार्ने काम मा प्रत्यारोपित छ whereupon शीर्ष छाला तह, punctured छ। छाला को सतह मा जो असल नलिका हावा मा छडी को टिप छ।
transdermal प्रत्यारोपण स्थापना क्लासिकल भेदी अधिक लाभ छ। यस निको प्रक्रिया प्वाल पार्ने काम लसीका विनियोजन गर्न सकिन्छ समयमा, छैन भन्दा सुखद गंध मा विशेषता। यो अप्रिय घटना बिना Transdermal प्रत्यारोपण निको। पहिलो दिन पछि लसीका को प्वाल पार्ने काम पनि जारी गर्न सकिन्छ, तर यो धेरै सुखद पहिले देखि नै छ नयाँ छेड्नु मालिक को मुख मा सकिन छैन। कम transdermal प्रत्यारोपण scarring आफ्नो हटाउने likelihood पर्याप्त उच्च miniaturized पछि छ। धेरै राम्रो माध्यम punctures निको।
अनुहार मा छाला punctures मात्र विशेषज्ञहरु बाहिर गर्नुपर्छ। घर मा यो छेड्नु के धेरै खतरनाक हुन्छ। अनुहार मा तंत्रिका अन्त को ठूलो छ। लापरवाह प्वाल पार्ने काम वा यसको लागि गलत तरिकाले चुनिएको ठाउँ मांसपेशीमा पूर्ण वा आंशिक पक्षाघात (ताना अनुहार) हुन सक्छ।
शहर मा एक राम्रो छेड्नु सैलून फेला पार्न र बस मालिकको को क्षमता बनाउन, प्रक्रिया को लागि साइन अप। ग्राहक द्वारा गालामा छेड्नु स्थानीय एनेस्थेसिया अन्तर्गत प्रदर्शन हुन सक्छ। प्वाल पार्ने काम प्रत्यक्ष चयन सजावट सम्मिलित छ जो एक विशेष उपकरण, प्रदर्शन। प्रक्रिया एकदम सरल छ र कुनै पनि विशेष प्रशिक्षण आवश्यकता छैन। अन्त मा ग्राहक हेरविचार लागि सिफारिसहरू प्राप्त गर्दछ।
एक सिद्ध तथ्य:, कि नयाँ छेड्नु एक ठूलो हदसम्म, निको कसरी राम्रो हुनेछ सजावट को विकल्प मा निर्भर गर्दछ। के नाम र गालामा छेड्नु बाली उहाँलाई लागि सही छ? मार्फत punctures मा छाला थप labrets लगाउन सहज। यो छड को विविधता छ। को सजावटी तत्त्व फिक्सिंग को लागि मुद्दा - एक अन्त्यमा रड समतल परिपत्र प्लेट र दोस्रो छ। यस प्रकारका मानक व्यास रड - 1.6 मिमि। क्लासिक स्टड र मोती, rhinestones, उज्ज्वल मोती र साना मूर्तिहरु - सजावटी टुक्रा कुनै पनि हुन सक्छ।
टाइटेनियम वा चिकित्सा इस्पात: पछि प्वाल पार्ने काम सजावट gippoallergennyh धातु चयन तुरुन्तै लगाउन। यो लामो छडीले सबैभन्दा labrets चयन गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। तुरुन्त प्वाल पार्ने काम पछि छाला को सुनिंनु - यो शरीर को एक सामान्य प्रतिक्रिया हो। सजाय क्षतिग्रस्त ऊतक संकुचन हुँदैन।
हेरविचार प्वाल पार्ने काम
प्वाल पार्ने काम गालामा कारण छाला निको पार्नुहुन्छ यो सामान्यतया 2-3 महिना छ को प्रकृति, एकदम जटिल छ। यो समयमा खुला पानी मा स्विमिंग पूल, धूपघडी र पौडी, सना को प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। को प्वाल पार्ने काम चोट छैन प्रयास - परिधान होल्ड कलर सुसज्जित गर्दा उनको टाउको माथि। यो पनि कस्मेटिक्स प्रयोग हटाउनु पर्छ, तपाईं तातो पानी संग धुन सक्नुहुन्न। को प्वाल पार्ने काम को निको समयमा प्रत्येक भोजन पछि आफ्नो मुख कुल्ला गर्न आवश्यक छ। बाहिर, यस छेड्नु एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने समाधान संग एक दिन 3-4 पटक उपचार गरिएको छ। यो निको अवधिको सजावट परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छैन। मास्टर कुरा: को गाल भेदी एक विशेष मलम राम्रो कसरी प्रयोग गर्ने छिटो निको "dimples"।
यदि सही गरेको र नियमित हेरविचार गालामा छेड्नु निको एकदम छिटो र painlessly। स्थानीय edema, लसीका र ichor को जारी,: को प्वाल पार्ने काम पछि पहिलो केही दिनको लागि सामान्य अत्यधिक लालास्रवण। यी लक्षण लामो समय को लागि विद्यमान भने, घायल प्राप्त गर्न वेबमास्टर सम्पर्क गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीं निको पार्ने र पनि सबै नियम संग "बाँच्न छैन" लामो समय punctures। केही प्रशंसक एउटा असफल निको फेरि गर्न प्रयास भेदी पछि निराश, छोटो समयमा के, यो मामला मा telomodifikatsy। गालामा भेदी प्रभाव सानो खत हुन सक्छ। मार्फत प्वाल पार्ने काम देखि चिह्न transdermal प्रत्यारोपण को सेटिंग मा भन्दा कम देखिने छन्। सामान्यतया निको scars कहिलेकाहीं तिनीहरूले गाल मा प्राकृतिक "dimples" सदृश, बल्लतल्ल देखिने छन्।
अनुहार मा छेदन घरमा गर्न सकिँदैन। को प्वाल पार्ने काम को सफलता धेरै हदसम्म सही स्थान र अनुपालन sterility संग निर्भर गर्दछ। Layman घर प्रक्रिया मा यी दुई अवस्था लागू गर्न सक्दैन।
गालामा घायल भएकाहरूलाई देखि प्रतिक्रिया
को गाला मा धातु "dimples" को खुसी मालिक के भन्न? यो छेड्नु धेरै प्रभावशाली देखिन्छ, तर आज अझै पनि एक rarity छ। तपाईं लागि यो telomodifikatsiya - तपाईं ध्यान आकर्षित गर्न र भीड देखि बाहिर खडा चाहनुहुन्छ भने। गाला भन्दा सुरक्षित दाँत प्वाल पार्ने काम ओठ छेड्नु। के विशेष राम्रो छ सजावट diction उल्लङ्घन गर्दैन र खाना प्रयोग रोक्दैन छ।
धेरै मालिक प्वाल पार्ने काम समय, सबै भूल भनेर स्वीकार। सफल निको को मामला मा सजावट बस महसुस गर्न ceases, र केवल ऐनामा हेर्दै तपाईं एक गालामा छेड्नु छ भनेर सम्झना।
पछि तिनीहरूले पछुताउनु छैन भनेर कसरी यस्तो punctures बनाउने? आफ्नो जीवन शैली आकलन, अनुहार मा सजावट अझै पनि कर्मचारीहरु पोशाक कोड आवश्यक जहाँ धेरै कम्पनीहरु, द्वारा निषेधित छ। तपाईं आफ्नो अनुहार उच्च मा भेदी छ चाहन्छन् भने, खोज विजार्ड जानुहोस्। आधुनिक मौज मा एक प्वाल पार्ने काम औसत लागत - 150-300 rubles - 1000 rubles देखि अलग labret खरिद। गालामा छेड्नु सकारात्मक समीक्षा र किनभने यसको सौंदर्य उपस्थिति को। यो telomodifikatsiya उत्तिकै राम्रो बालिका र केटाहरू गर्न अनुकूल। प्वाल पार्ने काम स्थान को उचित विकल्प संग यो एक व्यक्ति धेरै expressive बनाउन सक्छ।
हत्केलामा मा टाटु: अंडरवियर चित्रहरु विशेषताहरु
कसरी वयस्क र बच्चाहरु को लागि एक टाउको धुन
उनको माथिल्लो ओठ मा Epilation: समीक्षा। वा लेजर epilation - के राम्रो छ?
Peeling क्याल्सियम क्लोराइड - आधुनिक कस्मेटिक प्रक्रिया
कालो रवि (टाटु)। वर्ण को इतिहास, यसको मूल्य
हट डग - एक स्वादिष्ट नुस्खा र मात्र होइन!
बास्केटबल क्लब UNICS कजान: इतिहास, उपलब्धि, संरचना
सर्कल थियेटर: को GEF मा किंडरगार्टन मा काम को कार्यक्रम र विद्यालय
कसरी प्रदर्शन गर्न, काम छैन जब के कहाँ: "घर" iPhone मा बटन
दिन पुरानो व्यक्तिहरूको: छुट्टी इतिहास, परम्परा, सलाम
Amorphous र स्फटिक ठोस, उनको गुण
Ceramsite ठोस पर्खाल प्यानल: लक्षण
ध्यान समूह - समाजशास्त्र जानकारी सङ्कलन को एक विधि हो
शर्मीलीलाई कसरी रोक्न: मनोवैज्ञानिकहरूको सल्लाह
को थियोसिस को सान्दर्भिकता। उदाहरण थियोसिस, विश्लेषण
पेंडुलम ढोका: शैली र गुणस्तरको संयोजन
'Enterol' हो। समीक्षा, वर्णन, आवेदन